Kana munhu akambosuduruka panaMwari akazorangarira zvitadzo zvake uye ozotenda Jesu nokuzvisuka kwaakaita nokuzodzokera kuna Mwari, ndiko kunodaidzwa kuti kutendeuka.
Tose isu tiri zvikomo zvezvitadzo. Rrupinduko rwechokwadi, kuziva chokwadi chinotevera: kuti tiri vatadzi pamberi paMwari, uye kuti hapana chimwe chatingaita asi kungotadza kwehupenyu hwedu hwose uye nokuzoenda kugehena kana tafa; kuti tinofanira kugashira Jesu semuponesi wedu nokutenda kuti akauya pasi pano kuzotiponesa isu vatadzi, uye kuti akabvisa zvitadzo zvose (nokubhabhatidzwa kwake), akafa uye akamutsva kuti atiponese. Kutendeuka kwechokwadi kupa pfungwa kuna Mwari nokudzoka kwaari (Mabasa 2:38).
Kutendeuka kubvuma zvitadzo zvedu nekudzoka kumashoko aMwari, kugashira ruponeso rwemvura uye neropa nemwoyo yedu yose. (1 Johane 5:6)
Kutendeuka kwechokwadi kuzvibvuma kuve vatadzi vakuru pachedu uye kutenda muna Jesu, mwanakomana waMwari, semuponesi wedu uyo anova ndiye akatiponesa kubva muzvitadzo. Kuti tigokwanisa kuponeswa uye kusukwa zvitadzo zvose, tinofanira kurega kuda kuchenurwa nemabasa edu, uye tochibva tabvuma kuti tiri vatadzi vakuru pamberi paMwari nemurayiro yake. Tinofanira kubvumawo chokwadi choruponeso, nevhangeri remvura nemweya izvo zvatakapiwa naJesu nekubhabhatidzwa uye neropa rake.
Mutadzi anofanira kupira pfungwa nezvido zvake uye ochidzoka kuna Jesu zvakakwana. Tinoponeswa kana tikatenda kuti kubhabhatidzwa kwaJesu ndiko kwaiva kutora zvitadzo zvose achizviisa paari pachake.
Nemamwe mashoko, kubhabhatidzwa kwaJesu, kurovererwa kwake, uye nekumuka kwake kwakazadzikisa kururama kwaMwari, neruponeso rwevatadzi vose. Jesu akauya ari panyama, akabhabhatidzwa uye akarovererwa kuti abvise zvitadzo zvedu zvose. Ukave nekuvimba kwakakwana mune zvose izvi uye nekutenda kuti Jesu akamutswa kuti ave muponesi weavo vose vanotenda mukutendeuka kwavo kwechokwadi uye nekuvimba kwezvirokwazvo.